Izinto eziluncedo ngokugcina iintlanzi njengezilwanyana zasekhaya | Ngeentlanzi
Ukuba ungomnye wabo bafuna ukuba nesilwanyana ekhaya kodwa awukabinaso isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwesilwanyana, namhlanje sikulethela izibonelelo ekufuneka uzithathele ingqalelo kwaye ukhethe. gcina iintlanzi njengezilwanyana zasekhaya, ngakumbi ukuba ufuna ukuncama ukucocwa kwekhaya lakho kunye nombutho walo. Nika ingqalelo iinzuzo zokuba nentlanzi njengesilo-qabane:
Okokuqala, ngokungafaniyo nenja okanye ikati, iintlanzi azikhonkothi okanye zenze ingxolo, ngaphandle kwesandi esenziwa yi-aquarium kunye namaqamza aphuma kuyo. Nangona iintlanzi zingenakukhotha okanye zisikhathalele njengeekati okanye izinja, banako oko soze zingcolise iikhaphethi zethu, kwaye abayi kwenza iimfuno zabo naphina endlwini. Ulondolozo kuphela olufunekayo kukucoca i-aquarium ngamaxesha athile ukugcina amanzi ekwimeko efanelekileyo.
Olunye uncedo lokugcina iintlanzi njengezilwanyana zasekhaya kukuba ayifuni naluphi na uqeqesho, ngokungafaniyo nezinja kunye neekati, ekuye amaxesha amaninzi kufuneka sizifundise indlela yokuziphatha ngaphakathi nangaphandle kwamakhaya ethu. Ukuba omnye wabantwana bakho ucela isilwanyana sasekhaya, intlanzi kunokuba yinto elungileyo kwesi sizathu, kuba awuzukuba naxhala loqeqesho endaweni yoko ungafunda ukuba noxanduva kwaye unakekele isilwanyana sakho ngaphandle kokusoyika ngokwakho ngokumthatha ukuba ukhe uhambe okanye uzikhulule.
Ngendlela efanayo, ukuba into oyikhangelayo kukugcina imali, intlanzi iya kuba lolona khetho lufanelekileyo, kuba le ngexabiso eliphantsi, isilwanyana esinexabiso eliphantsi. Konke okudingayo sisixa esincinci sokutya inyanga nenyanga kunye nokhathalelo olusisiseko olungayi kwenza nzima inkqubo yakho okanye ubomi bakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Izinto eziluncedo zokuba neentlanzi njengezilwanyana zasekhaya
Kupholile kakhulu ukujonga iintlanzi, kodwa kufuna ulwazi ukuze zingafi, ngokungafaniyo neenja neekati ezinobomi obude
Andiqondi ukuba sisondlo esisezantsi kunye nexabiso eliphantsi lesilwanyana, ndineminyaka emininzi ndinamanzi olwandle kwaye ndicinga ukuba yinto ebiza kakhulu ingakumbi ukuba ufuna ukunika ezi zilwanyana ubomi obulungileyo